IIKHOMPYUTER ZENZUZO YOKURHWEBA NGENTENGO - IBHLOG
Iikhompyuter zeNzuzo yokuRhweba ngeNtengo
Kuyabalwa ngamanye amaxesha kuya kufuneka ubale ngoko nangoko inzuzo yakho yorhwebo, uguqule enye imali yedijithali iye kwenye kwaye ujonge umvuzo onokubakho kwimpahla yakho yezemigodi.
Ngokubanzi ukubala inzuzo yakho yorhwebo, kuya kufuneka wenze izibalo ezimbalwa ezilula ngesandla. Umzekelo, xa uthenga ii-Bitcoins ezi-2 (i-BTC) kwi- $ 7.200 kwaye uzithengise nge-9.800 yeedola, ubungakanani bentengiselwano zii-2 Bitcoins (BTC). Ukubala inzuzo yakho, masithathe ixabiso lokuthengisa le- $ 9.800, shenxise ixabiso lokuthenga le- $ 7.200 kwaye wandise umahluko ngokobukhulu betransekshini. Oko ikakhulu kwenza inzuzo ye- $ 5.200. Ke abathengisi abaziingcali bahlala bezisebenzisa izixhobo zokubala zokufumana inzuzo ukonga ixesha, kwaye nazi izisombululo ezimbalwa onokuzifumana, nazo.
Eyona ndlela ilungileyo ngeBitcoin yokubala elula
Esi sibali sokubala sisisombululo seBitcoin kuphela, kwaye kunjalo, sikunika indlela ekhawulezayo yokubala iinzuzo zakho. Kanye ngesixhobo sangaphambili, kufuneka ufake inani leemali, i-Bitcoins (i-BTC) kule meko, kunye nokuthengwa nokuthengisa amaxabiso. Ngokuchasene nenye ikhalityhuleyitha, ungabandakanya nemirhumo oyenzileyo. Ukongeza ungakhankanya nezicwangciso, ezinde okanye ezimfutshane, okanye ubale imirhumo kuphela.
Kukwafundwa ukuba iCurrexy yindlela entle yokufunda ukuba utyalo-mali lwakho lweBitcoin (BTC) luxabisa ntoni kwiimali ezininzi. Faka nje i-Bitcoin (BTC) oyifumeneyo kwaye ujonge imali elinganayo kwi-USD, i-EUR, i-GBP, i-ETH, i-LTC kunye ne-Dash.
Yeyiphi eyona nkampani ilungileyo yokutshintsha isoftware yedijithali?
Ngaphandle kwamathandabuzo IHashogen Technologies yinkampani edumileyo yokukhuthaza ukutshintsha isoftware kunye neqela lezixhobo ezinobuchule. Eyona motto yabo iphambili kuthi kukubonelela ngeenkonzo eziqhutywa yitekhnoloji ngexabiso elifikelelekayo ngaphandle kokujongela phantsi umgangatho. Omnye unokungqina umgangatho weBitcoin Exchange Script, iskripthi sokutshintshiselana nge-Cryptocurrency kunye nesoftware yokutshintshiselana nge-Cryptocurrency evela kwiHashogen Technologies.
Ndwendwela iiDemo zonxibelelwano: http://exchange.consummo.com/
#crypto zokurhweba ngeniso zorhwebo #cryptocurrencyexchangescript #cryptoexchangescript #bitcoin #blockchain
uyithenga phi imali engunxantathu
Ungayitshintsha njani i-password yam
Jonga ukuba iJson efanelekileyo
usebenze njani ixesha lokubonisa nanini na